Osisi Ọkụ - Gaa! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ (Ụdị oge // BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
AKWỤKWỌ NDỊ KWESỊRỊ KWESỊRỊ
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > Ụlọ & Ọkụ > osisi
Na BSO-nkuzi oge osisi nweta ihe omuma gi na ihe omumu bara uru n'onu nke ime n'ime ime na nke ndi ozo, ihe ndi ozo na ime mma. Nke a na mkpado. Ọ bụ otu ọzụzụ dị irè na ihe ole na ole n'ozuzu. Ị na-aga oru ngo malite.
Na Ogwe 2e osisi mụta ịrụ ọrụ na mpempe akwụkwọ site na ntinye na ịmepụta ngwá ụlọ (ihe nkedo na igwe milling, ikiri okirikiri, ...). Ị mụtara ma jiri ụdị osisi na ihe dị iche iche. Ị na-amụta ihe ndị e ji rụọ ọrụ na ịkwado nkà na ịkwadebe, gbakọta ma mee obere ụlọ. A na-akwụzikwa ọtụtụ nlebara anya na ịkwado iwu nchekwa.
Na Ogwe 3e osisi Nweta ihe ọmụma na ahụmịhe bara uru ma ihe gbasara nhazi ụlọ na ime ụlọ na n'èzí. N'ọmụmụ ihe anyị, ị na-amụta ihe nile 'ọrụ iji nweta' iji mezuo: site na atụmatụ, nyocha, na ọnụahịa ọnụ iji nyochaa na ime na ịmecha ngwaahịa ahụ. Ị mụta otú ị ga-esi arụ ọrụ na ịnọgide na-arụ ọrụ nhazi ụlọ.
N'oge gị ụwa ị nweta ohere zuru oke nke ihe ị maara ma nwee ike itinye n'ọrụ. Ị na-atọ ụtọ ezigbo ọrụ n'ime ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ọkụ. N'ụzọ dị otú a, i nwere ike ịzụlite nkà gị n'ịrụ ọrụ n'adabereghị onwe ya ma bụrụ ihe dị mfe n'iji ígwè arụ ọrụ.
Ị nwere anya maka nkọwa
Ị na-achọ iji aka gị na-arụ ọrụ na ihe ndị ọzọ? Ị nwere mmetụta nke nkwụsịtụ? Ị na-ahụ onwe gị ka ị na-arụ ụlọ, na-edozi oche, na-eme steepụ na ntinye, wdg.
Ị nwere ike ịmalite na nkuzi osisi, ma ọ bụ ihe amamihe ịmalite site na nrịgo 2e. Anyị na-atụ anya na ị ga-anụ ọkụ n'obi ịmụta na ihe ziri ezi na ime ihe dịka ezigbo ọkachamara. N'inye ndị ọrụ ị na-arụ ọrụ na ọzụzụ a, nchekwa dị ezigbo mkpa. Buru n'uche na ọzụzụ nkuzi nwere ike ọ gaghị abụ ezigbo echiche ma ọ bụrụ na ị na-ahụ nsí, ụfọdụ ụdị osisi na / ma ọ bụ nhazi ngwaahịa.
De ogo mbụ nke ụlọ ọrụ bụ ọzụzụ kachasị mma.
Mgbe nhazi 3e osisi ị nweta ya akwụkwọ nke Secondary Education. Ị nwere, Otú ọ dị ọ bụghị akwụkwọ diplọma nke abụọ. Ya mere, a na-atụ aro ka inwe otu Afọ 7e maka iche iche ịgbaso. N'ụlọ akwụkwọ anyị, ị nwere ike ịmepụta nke ọma n'ọhịa ebe a na-amụ osisi Mma ụlọ. Mgbe ọ na-enweta ya diplọma nke mmụta sekọndrị ị bụ onye na-arụ ọrụ nkụzi zuru oke ma nwee ike ịmalite ọrụ n'ebe ọrụ ma ọ bụ ọbụna ịmalite azụmahịa gị.
Afọ 3e nke na-erughị ala (36KB, .pdf)
Afọ 4e nke na-erughị ala (39KB, .pdf)
Afọ 5e nke na-erughị ala (37KB, .pdf)